Nkọwa:Automatic Hydraulic Compact Press Feed Feed,Ngwunye na-enye nri Decoiler Straightener,Ngwa nri 3 IN 1 igwe
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka > Space Master Compact Coil Line
Ihe Nlereanya.: MAC1
Usoro a na-agbakọ obosara na SpaceMaster bụ nke adịghị edozi, ịgbatị, na inye nri dị mma maka ngwa mgbochi. Ngwunye eriri igwe akpọrọ SpaceMaster jikọtara ọrụ atọ nke ịhapụ, ịgbatị, na inyeju ngwaahịa coil n'ime otu igwe. Ndokwa a na-eme ka inye pipụ ihe eji arụ ọrụ nke ọma wee chekwaa ahịhịa dị mma nke nwere ihe ọkụkụ.
A na-etinye oghere SpaceMaster na igwe nkịtị maka nchekwa kwụsiri ike n'oge usoro nri. Ihe a na -akpo eriri igwe bu ihe ndi AC inverter task drive na moto. Ihe na - ebugharị feeder-straightener bụ nke mechiri emechi uzo servo draịva na moto.
Akụkụ omogbọala: Bracket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, ngwa eletriki, Akụ nke Partlọ Mbipụta, Mbipụta Kọmputa, Slgbọ ala ụgbọ ala, oche mkpuchi ụgbọ ala, sọks nke ahụ ụgbọ ala wdg.
MAC1 SpaceMaster Compact Coil Line na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
Nweta eriri igwe nke SpaceMaster maka ikpuchi ahịrị nrịpụta ígwè.
Nke a bụ otu n'ime ndị ahịa anyị na Slovenia, ha na-arụpụta akụkụ igwe ihe eji eme ihe na SpaceMaster Compact Coil Line .
4 n'ime 1 Straightener Feeders Kpọtụrụ ugbu a
Press Room NC Leveler Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Ndị na-enye Servo na Straightener Kpọtụrụ ugbu a
Automatic Hydraulic Compact Press Feed Feed Ngwunye na-enye nri Decoiler Straightener Ngwa nri 3 IN 1 igwe Automatic Hydraulic kọmpat Press Systems Automatic Press Line Automatic Press Line Line Automatic Coil Feed Decoiling Line Automation 3 na 1 Feeder